Bilayska ayaa sheegay in Bandowgii Afgooye uu amniga kor u qaaday - Sabahionline.com
Bilayska ayaa sheegay in Bandowgii Afgooye uu amniga kor u qaaday
Mas’uuliyiinta ku sugan Afgooye ayaa sheegay in bandoowgii saarnaa degaanka Afgooye tan iyo markii magaalada la xoreeyay bishii hore uu noqday mid mira-dhal ah, sidaana waxa Axaddii (24-kii June) sheegay raadiyaha ay maamusho dawladda ee Radio Muqdisho.
Taliyaha Bilayska Afgooye Ibraahim Diini Isaaq ayaa sheegay in xaaladda magaaladu ay si wayn uga soo raysay, sababtoo ah bandowga lagu soo rogay, kaasoo ay asalkiisiiba soo rogiddiisa ku taliyeen odayaasha magaalada. Bandowga habeeynimo ayaa dhaqan-gal ah laga bilaabo 6:15 maqribnimo illaa 5:15-ka arroornimo.
Isaaq waxa uu Radiyo Muqdisho u sheegay in ciidamada ammaanku ay howl-galladooda ku fidiyeen goobo ka baxsan Afgooye, taasoo qayb ka noqotay wanaajinta ammaanka aagga.
Soo rogista bandoodu waa talaabo arbush ku ridi karta hawlgalada kooxaha argagixisada ah. kooxahaasi waxay igu khasbeen inaan dalkayga kasoo cararo, waxaanan aad u rajaynayaa inaan awood dhawaan inaan dalkayga ku laabto, dadka soomaaliyeedna khayr ayaan u rajaynayaa. Anigoo ah walaalkiin khaalid soomaali, oo ku nool dalka Jordan.